Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Igbu Egbugbu? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
E kwuru gbasara igbu egbugbu naanị otu ugboro na Baịbụl. Ọ bụ na Levitikọs 19:28. Ebe ahụ sịrị: “Unu egbukwala egbugbu n’ahụ́ unu.” Chineke nyere mba Izrel iwu a iji mee ka ha dị iche n’ebe mba ndị ọzọ gbara ha gburugburu nọ. Ndị obodo ndị a gbara ha gburugburu na-ede aha chi ha ma ọ bụ see chi ha n’ahụ́ ha. (Diuterọnọmi 14:2) Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị Ndị Kraịst ka e nyere iwu ahụ, ma anyị kwesịrị iche echiche nke ọma mata ihe mere e ji nye ya ụmụ Izrel.
Onye Kraịst ò kwesịrị igbu egbugbu n’ahụ́ ya?
Amaokwu Baịbụl ndị e dere n’okpuru ebe a ga-enyere gị aka ịma ihe ị ga-eme:
“Ka ụmụnwaanyị were ihe ịchọ mma kwesịrị ekwesị chọọ onwe ha mma, otu na-egosi imeru ihe n’oke.” (1 Timoti 2:9, Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik) Ihe a Baịbụl kwuru gbasakwara ụmụ nwoke. Anyị ekwesịghị ime ihe ga-akpasu ndị ọzọ iwe, ma ọ bụkwanụ mee ihe ga-eme ka ọ bụrụ anyị ka ndị mmadụ ga na-ele.
Ụfọdụ ndị na-egbu egbugbu ka e jiri ya mara ha ma ọ bụ ka ha gosi na ha eruola ime ihe ọ bụla masịrị ha. Ndị ọzọ na-egbukwa egbugbu iji gosi na ọ bụ hanwa nwe ahụ́ ha. Ma, Baịbụl na-agwa Ndị Kraịst, sị: “Unu nyefee Chineke ahụ́ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke mma, ya bụ, ozi dị nsọ site n’ike iche echiche unu.” (Ndị Rom 12:1) Jiri “ike iche echiche” gị mara ihe mere i ji chọọ igbu egbugbu. Ọ bụrụ na ihe mere i ji chọọ ime ya bụ na ị hụrụ na ndị ọzọ na-eme ya ma ọ bụkwanụ na ị chọrọ iji ya gosi òtù ị nọ na ya, cheta na i nwere ike ịgbanwe obi gị echi, mana egbugbu ahụ agaghịzi ekwe nhichapụ. Ọ bụrụ na i chebara ihe mere i ji chọọ igbu egbugbu echiche nke ọma, ọ ga-enyere gị aka ịma ihe kacha mma ị ga-eme.—Ilu 4:7.
“Atụmatụ onye dị uchu aghaghị iweta uru, ma onye ọ bụla ọ na-adị ngwa ngwa aghaghị ịdaba n’ụkọ.” (Ilu 21:5) Ọtụtụ ndị na-egbu egbugbu anaghị eche echiche nke ọma tupu ha emewe ya. Ma, o nwere ike imebi mmekọrịta ha na ndị ọzọ ma ọ bụ kpatara ha nsogbu n’ebe ọrụ ha. Nsogbu ndị ahụ na-adịtekwa aka. Ọ na-efu ezigbo ego ihichapụ egbugbu, ọ na-afụkwa ezigbo ụfụ. Nchọpụta e mere na-egosi na ọtụtụ ndị gburu egbugbu na-emecha chọwa iwepụ ya. Otú ndị mmadụ si ekwo ekwo n’ebe ndị a na-ewepụ egbugbu gosikwara na ọ bụ eziokwu.